Evgeny Stepanov (iminyaka yokuphila: 1911-1996) - abadumile Soviet fighter umshayeli, ngubani wakwazi ukufeza Ngobusuku bokuqala inqama emoyeni. Lokhu kwenzeka ngo-Okthoba 1937 e-elinezinkathazo esibhakabhakeni Spanish. Izinkumbi lokhu feat, kancane wayaziwa ngenxa non-ukudalulwa iqhaza empini iSpanishi, ebuthweni lempi laseSoviet.
Kwaphela isikhathi eside kwakucatshangwa ukuthi ebusuku ramming sokuqala senzeka ngo-Agasti 1941: umshayeli Soviet Viktor Talalikhin eMoscow wehliswa isitha webhomu Yena-111.
ram Night Evgenia Stepanova
Okthoba 28, 1937, bephethe phezu Barcelona ku yakho mina-15 ukulwa emsebenzini, endaweni engamamitha 2000 amamitha Stepanov evgeniy Nikolaevich wathola i webhomu isitha. Uma uzama usondele kwamhlangabeza ayebulawe. Stepanov ephethwe umlilo amaphiko isitha izindiza izibhamu umlilo, kodwa angazi ukuthi iyeke isitha. Njengoba isikhathi ulayishe isikhali akukho ukukhetha Stepanov watimisela kuya yenqama. Ukuze alondoloze endizeni injini bese bendiza isiteleka, esahlanganisa ngesikhathi umsila we imoto, okubhekana amasondo. Nokho, esishelelayo hhayi enamandla kakhulu, wawufinyelela umgomo wakhe: webhomu ongalawuleki nezisebenzi ishayisa kolwandle. Evgeniy Stepanov, senza akwazi ukubonisa ukuhlala eminye emoyeni, baqhubeka izulazula futhi ngokushesha waqala enye umshini isitha ukuthi ngu bombarding ophoqelelwe ukuze ujike phakathi olwandle, lapho ekugcineni wamshaya. Ngemva kokuhlinzwa ngempumelelo umshayeli Soviet ayebuyele eziphambekweni airfield Sabadell lapho watshala ngobunono ezilimele mina-15. Sekukonke, Evgeniem Stepanovym, obani ababefaka callsign Eugenio emoyeni kwenziwa 16 izimpi futhi wadutshulwa phansi 10 isitha izindiza.
Sturm Garapenilos sezindiza
Ngaphambi kokuzibulala edumile Night inqama ebalulekile ekuhlaleni kwesisu kanye nezindlela phansi kuhlasela kwaba airfield edolobheni Garapenilos (eduze Zaragoza), aphethwe Okthoba 15, 1937. Ngokwenhlolo-ethumba umshayeli isiNtaliyane, kwaba ukuqaphela emakamu phezu airfield kwalesi sigodi okukhulunywe ngawo ngaphambili mayelana eziyisishiyagalombili kweshumi ekuhlaseleni Italian futhi bomlilo. Ulwazi waqinisekiswa zezobunhloli. okwazanywa ukuze kuqhunyiswe isigaba eziningi aziphumelelanga, ngoba airfield kwaba ngaphansi ikhava ezinhle.
Kwanqunywa ngokuzumayo ukuhlasela amabutho fighter we republic Air Force. Umsebenzi oyinhloko ukuze anqobe airfield wabelwa 2 isigaba "Chatos" (kusukela eziyisithupha iqhaza), induna okwakukhona Anatoly Serov, iphini - umshayeli Stepanov. Ngenxa yalokho wokusebenza ngempumelelo indiza isitha 11 ngokuba silishiyile izwe, ezilimele engaphezu kwengu-20. Futhi kanzima hit isitoreji isitha nezinhlamvu nophethiloli.
Fight in the Spanish esibhakabhakeni ebusika
Januwari 17, 1938 kwaba impi yokugcina esibhakabhakeni of Spain Stepanova. Umkhuzi isigaba ethunyelwe ohlangothini idwala mass Universales ukubamba "Junkers" futhi ephelezelwa zabo "Fiat" abaningi. Le mpi yathatha indawo elingenhla kwedolobha Ojos Negros, futhi nenombolo ye-isitha, ukuthumela amasosha ezibakhungathekisayo Republican, cishe kathathu inani pilot Soviet.
Evgeny ngempumelelo ephethwe ukuhlasela futhi ngehlise "Fiat". Stepanov ngaleso sikhathi zaqala ukwamukelwa ukuphishekela fighter yesibili, uphonse umsila wakhe futhi wazama nomlilo, kodwa uphelelwa Ammo. umshayeli Soviet wenza isinqumo ukuya yenqama. Futhi ngaleso sikhathi imoto yakhe yahlanganisa nabangenasihawu isitha antiaircraft umlilo. Fragments ezilimele control injini izintambo aphazamisekile. Idivayisi ayisekho balalele futhi Itilosi cool waya maqondana phansi. Stepanov ephethwe ukuba siphume bese uvula parachute.
Ngo inqubo kokufika aviator elinesibindi kakhulu ezilimele emadwaleni futhi ngiqaphele elahlekile. Moroccan wathunjwa, ngivalelwe ngedwa ejele, washaywa, bephenywa ukuhlukunyezwa futhi ahlukunyezwe. Pilot bebulawa indlala, wadutshulwa amahlandla amathathu ahoxiswa.
Ngenxa ukusizwa eNhlangano Yomhlaba Yesiphambano Esibomvu, ezinyangeni eziyisithupha kamuva, Yevgeny Stepanov kushintshiswane ngoba umshayeli German. Ukubuyela lakubo, wakhushulelwa induna futhi ngabelwa Leningrad Military District ofundisa ukuzanywa imiklamo.
Imininingwane omlando womuntu: Stepanov evgeniy Nikolaevich
Moscow - umuzi lapho Meyi 22, 1911 wazalwa umshayeli elinesibindi. Ngemuva kwesokunxele 7 amakilasi imfundo ezikoleni ukuhweba esikoleni ujantshi. Lokhu kwalandelwa umsebenzi eshabhu wensimbi sika, beqeqesha kule club ifektri umsakazo, okunye ukuhlola e-esikoleni idolobha abashayeli bezindiza futhi indiza zamahora. Ngo-1932 wabhalisela ukufunda e-Borisoglebovskay Pilot School, okwathi ngemva kwalokho wayezimisele ukukhonza kule webhomu, futhi kamuva othanda ukulwa. Njengoba umshayeli abakhulu, wayekhonze njenge ngxenye 12 Air isigaba.
Merit aviator elinesibindi
Ngemva iqhaza ezenzakalweni 1939 endaweni Khalkhin Gol River njengoba induna isigaba waba nengxenye belwa Japanese landizela I-16 futhi mina-153. Wenza umsebenzi ngokudlulisela isipiliyoni kulwa abashayeli ungazange ihlangabezane esibhakabhakeni nesitha: kubo ujwayelene endaweni ezungezile, ukuze afeze ukuqeqeshwa izindiza. Ubude e Mongolia engaphezu kwekhulu nokuhlasela Kwakuseshwa uKaputeni Stepanov, owabanjwa mhlaka 5 emoyeni izimpi, wadutshulwa phansi izindiza ezine isitha. Ukuze imisebenzi yabo ezempi ngo isibindi isibindi ngo-1939 Yevgeny Stepanov waklonyeliswa "Ukuze alamandla empi" oda Mongol, izindondo "Gold Star" futhi isihloko Hero zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa.
umsebenzi Ngaphezu kwalokho somshayeli ongumakad 'ebona ukuqhubeka iqhaza empini Soviet-Finnish. Phakathi neMpi Omkhulu Patriotic umshayeli Soviet wayala ukuzanywa inqubo ngesikhathi eMoscow Military District. Njengoba sekunama-isikhathi ukuthula ngashiya egciniwe, kodwa eduze liaised nge zezindiza, okuphambene ukusebenza. INhloko Central Aeroclub kubo. Chkalov.
Yena ukuphila ukuba zezindiza
Njengo-pilot eziningi zeSoviet Union, ingxenye enkulu yokuphila kwakhe anikezelwe zezindiza Stepanov, basebenza nzima ukuze baqinise sitfunti salo namandla okhulisa. Wabhekisa amabombo ithimba ngesikhathi imincintiswano international eyayisemadolobheni ahlukahlukene emhlabeni wonke. It Yevgeny Stepanov ukubeka isignesha yokuqala isenzo eqinisekisa senzakalo esikhulu - ukunqotshwa kokuqala isikhala Yuriem Gagarinym.
I Federation Aéronautique Internationale Wasebenza Vice-President, kule minyaka engu-70 ngesikhathi isitshalo eMoscow ukwenziwa ezinophephela emhlane guided indiza yokuhlola esiteshini kuyinto umcwaningi kuyo le Central Indlu Aviation futhi Cosmonautics.
Akubi Stepanova Evgeny Nikolaevich Septhemba 4, 1996. Umlotha aviator abadumile, ukunqoba isibhakabhaka ukuze kuzuze ngokuphila okunokuthula kwabakhileyo ezweni uhlezi phezu Troekurov emathuneni.
I-chickenpox kubantu abadala